Galaxy Note9ကို 512 GB သိုလှောင်မှုပမာဏဖြင့်စျေးကွက်သို့ကျရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည် Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | မိုဘိုင်း
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကိရိယာများ၏ကင်မရာသည်၎င်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ High-end ဆိပ်ကမ်းအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဗီဒီယိုများ 4k အရည်အသွေးနှင့်နှေးကွေးစွာမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီနှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဖိုင်အတော်များများကမ်းလှမ်းထားတဲ့အတွက်သိုလှောင်မှုနေရာကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
အချို့သောထုတ်လုပ်သူများကသုံးစွဲသူများနှင့်အတူ microSD ကဒ်ဖြင့်သိုလှောင်မှုနေရာကိုချဲ့ထွင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်မှာမှန်သော်လည်း သူတို့ကဒီရွေးစရာကိုမကြိုက်ဘူးအကြောင်းမှာသူတို့သည်ဖုန်း၏မှတ်ဉာဏ်ပါအကြောင်းအရာများကိုကဒ်ထဲသို့အမြဲလွှဲပြောင်းပေးရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စများတွင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမှာသိုလှောင်ရန်နေရာအလုံအလောက်ထက်မကရယူရန်ဖြစ်သည်။
မှတ်စုအကွာအဝေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာတိုင်းကိုလက်တွေ့ကျကျလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် သုံးစွဲသူများစွာအတွက်နေရာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်ပိုမိုသောအသုံးပြုသူများအတွက် Samsung သည် Galaxy Note 512 ၏9GB ရှိမော်ဒယ်တစ်ခုကိုဈေးကွက်ထဲ၌ဖြန့်ချိရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော 4k အရည်အသွေးရှိသောဗီဒီယိုအားလုံးကိုသိုလှောင်ရုံသာမကဘဲလိုချင်သောဗီဒီယိုများကိုလည်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို USB သို့မဟုတ်အိတ်ဆောင် hard drive ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမြဲသယ်ဆောင်ရန်။
ထုံးစံအတိုင်းကိုရီးယားကုမ္ပဏီ အားလုံးစျေးကွက်များတွင်ဤမော်ဒယ်ကိုဖွင့်မည်မဟုတ်ဒါဟာအချို့စျေးကွက်များတွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Note9၏ဘက်ထရီသည် ၄၀၀၀ mAh အထိရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးစက်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူများကို 4.000k format ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီကိရိယာထဲမှာ4GB RAM ကိုတွေ့ရမယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနံပါတ်ကို6GB အထိတိုးနိုင်မယ်ဆိုတာမစဉ်းစားသင့်ဘူး။
နောက်ထပ် Galaxy Note9၏လက်မှလာမည့်နောက်အသစ်တစ်ခုကိုအီးတွင်တွေ့ရသည်ဌဒီ terminal ကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်အရောင်အရေအတွက်ကောလာဟလများအရကုမ္ပဏီ၏မှတ်စုအကွာအဝေးကိုတင်ပြရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည့်နေ့မတိုင်မီနှစ်ပတ်သို့မဟုတ်သုံးပတ်အလိုတွင်သြဂုတ်လ ၂ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Galaxy Note9ကို 512 GB သိုလှောင်မှုပမာဏဖြင့်စျေးကွက်သို့ကျရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
Jesus Barreiro Taboada ဟုသူကပြောသည်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာ, ဒီကင်လုပ်ခိုင်းအားလုံးယူသောဤ SONY နှင့် NOKIA ဘယ်မှာလဲ? ? ? ? ?
Jesús Barreiro Taboada အားစာပြန်ပါ